Ungamamela njani kuMculo kuWebhu ngelixa usebenzisa ezinye iiNkqubo Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ungawumamela njani umculo we-YouTube ngelixa usebenzisa ezinye iiNkqubo
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 315
Libala malunga nokuyeka ukumamela umculo we-YouTube ukuze uvule nasiphi na esinye isicelo kwiselfowuni yakho. Ngoku ungadlala iividiyo zakho ozithandayo kweli qonga ngaphandle kokuzimisa ziye kwezinye ii -apps. Ngokusebenzisa inqaku elilandelayo siza kukufundisa iqhinga lokuba ungakwenza njani.
Ukuba ungomnye wabo bantu bathanda ukusebenzisa i-YouTube ukumamela umculo abawuthandayo, uya kuqonda Iyacaphukisa njani into yokuba unqumame ividiyo kwaye uvale iapp ukuze ukwazi ukusebenzisa elinye iqonga, umzekelo thumela umyalezo nge-WhatsApp. Akufuneki ukuba njalo.
Dlala iividiyo zeYouTube ngaxeshanye njengokusebenzisa ezinye iiNkqubo
Akukho mfihlo kuye nakubani na ukuba iYouTube ngoku lelinye lawona maqonga athandwayo kwiwebhu, ngakumbi xa umamele umculo. Okwangoku izigidi zabasebenzisi bayayisebenzisa ukonwabela umxholo okwahlukeneyo, kubandakanya iimuvi, iividiyo zomculo kunye neenkqubo zeTV.
Omnye umda osikelwe umda yiYouTube ubusoloko uboniswa inyani yokuba kufuneka uvale usetyenziso ukuze ukwazi ukusebenzisa amanye amaqonga kwifowuni. Nangona kunjalo, ngoku kunokwenzeka ukuba udlale nayiphi na ividiyo ye-YouTube kwaye kwangaxeshanye wenze ezinye usetyenziso kwiselfowuni.
Zininzi iindlela zokufezekisa oku kwaye siza kukubonisa amanye amaqhinga aphambili ungaqala ukuyiphumeza ukunqanda ividiyo ukuba iyeke ukudlala xa ushiya iqonga leYouTube.
Ubuqhetseba esiza kukufundisa ngokulandelayo busebenza kuphela kubasebenzisi abasebenzisa inkqubo yokusebenza ye-Android. Iindaba ezimnandi zezokuba awuzukufuna ukufaka okanye ukhuphele naluphi na uhlobo lwezicelo ezingaqhelekanga kwiselfowuni yakho ukuze ukwazi ukudlala iividiyo zeYouTube nokuba usebenzisa amanye amaqonga.
Ekuphela kwento oya kuyidinga ukuze wenze eli qhinga lelakho iselfowuni kunye nesikhangeli esikhethiweyo. Eminye iya kuba lula ukwenza kwaye nanga amanyathelo ekufuneka elandelwe.
Amanyathelo okudlala iYouTube ngelixa ndikwezinye iiapps.
Sihamba kunye inyathelo ngenyathelo Kuya kufuneka ulandele xa ufuna ukuqhubeka nokumamela ividiyo ye-YouTube kodwa kufuneka uphume eqongeni kwaye uvule esinye isicelo esifakwe kwiselfowuni yakho, umzekelo i-WhatsApp okanye iTelegram.
Inyathelo lokuqala liya kuba vula isikhangeli osikhethileyo kwiselfowuni yakho, inokuba yiChannel okanye Firefox. Ukuba awunayo enye efakwe kwiselfowuni, ungayikhuphela simahla kwivenkile yeapp.
Nje ukuba ungene ngaphakathi kwisikhangeli, kuya kufuneka ubeke le url kwindawo yedilesi: Youtube.com
Khetha ividiyo ofuna ukuyidlala. Ngoku nqakraza kumachaphaza amathathu avela kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini kwaye ucofe ukhetho "Jonga indawo ye desktop"
Inkangeleko yephepha iya kutshintsha. Ngoku ngokulula phuma kwisikhangeli kwaye uvule nasiphi na isicelo ufuna ukusebenzisa kwiselfowuni. Ividiyo iya kuqhubeka nokudlala ngaphandle kwengxaki.
1 Dlala iividiyo zeYouTube ngaxeshanye njengokusebenzisa ezinye iiNkqubo
2 Ukusuka kwi-Android
3 Amanyathelo okudlala iYouTube ngelixa ndikwezinye iiapps.
Indlela yokwenza abantu babone izikhonkwane zam kwiPinterest?
Funda indlela yokuthenga kwiPinterest